Fọdụ folks na-akpọ ya micro-ịde blọgụ; Agbanyeghị, ana m ahụ ya n'onwe ya dị ka mkparịta ụka ma ọ bụ oghere emeghe karịa blog ebe ọ bụ na ọ na-enwe mmekọrịta mmekọrịta n'etiti microblogger na ndị na-ege ntị. A blog na-enye isiokwu nke onye na-ede blọgụ nwere ike imepe mkparịta ụka na post zuru ezu nke na-abịa na ikike authority Twitter anaghị anabata ohere maka ikike, ọ na-emepe mkparịta ụka ahụ.
Twitter na-enye gị ohere 'ịgbaso' ndị folks ahụ ị nwere ike inwe mmasị na ya. Enwere ụfọdụ nnukwu aha na ụlọ ọrụ ntanetị na-etinyekarị na Twitter. Offọdụ n'ime ha na-arịọ n'ezie ozi ma ọ bụ na-ezigara ndị na-abịanụ ihu akụkọ na akụkọ na-abịa n'ihu. M n'ezie nụrụ ozi ọma na Heath ledger nwụrụ na Twitter - ọ bụghị na akụkọ ma ọ bụ na weebụ!
Ọ bụrụ na biputere tweet nke bụ mkpụrụ edemede 140 ọbụlagodi, nke ahụ bụ Twoosh, tụnyere ndị Sọọsh ụda nke basketball mgbe ọ na-amị mfe site na nkata. Ndị enyi m na Ọrụ Ntughari ewuwo, ihe enwere ike ịkọwa dị ka, egwuregwu kacha aba uru, adịghị njọ, egwuregwu na-enweghị ntụpọ mana na-adịghị emerụ ahụ m hụtụrụla na ịntanetị, EBUKA 140.
Enweghị m ike ikwere na a ckedụrụ m na nke a!
Jake Matthews kwuru